स्वास्थ्य पेज » निरोगी जीवनका लागि कस्तो दिनचर्या ? निरोगी जीवनका लागि कस्तो दिनचर्या ? – स्वास्थ्य पेज
शारीरिक रुपमा मात्र तन्दुरुस्त भएर पुग्दैन, मानसिक रुपले पनि तन्दुरुस्त हुनुपर्छ । शान्त, सकारात्मक, उत्साहित मन हुनुपर्छ । बिहान सूर्योदयअघि उठ्नु, सौच क्रिया गर्नु, व्यायाम गर्नु, ध्यान गर्नु, नास्ता गर्नु राम्रो दिनचर्याको सुरुवात हो ।
बिहान ताजा एवं पोषिलो नास्ता गर्नुपर्छ । किनभने रातभर केहि नखाने हुनाले हाम्रो मोटाबोलिज्म धीमा हुन्छ, जसको कारण तनाव हर्मोन बढ्छ । यसले हृदय रोग, तौल बढ्ने, मधुमेह हुने संभावना रहन्छ । जब हामी लामो समय केहि खाँदैनौ, तब हाम्रो शरीरमा पोषक तत्व कमी हुन्छ । त्यही कारण विहान उठ्नसाथ नास्ता गर्नुपर्छ ।
भोक मेट्ने वा नास्ता गर्ने भन्दैमा जस्तो पनि खानेकुरा सेवन गर्नु ठीक होइन । कतिले छिटो छरितोको लागि जंक फूड सेवन गर्छन् । यो हाम्रो शरीरको लागि अखाद्य पदार्थ हो, जसमा ट्रान्स फ्याट (वोसोको सबैभन्दा खराब प्रकार) हुन्छ । यसले शरीरमा एलडीएल कोलेस्टोरको स्तर बढाइदिन्छ र एचडीएल कोलेस्टोरको स्तर कम गर्छ । नतिजा, हृदय रोगको खतरा हुन्छ । त्यसैले नास्ता स्वस्थ्य, पोषिलो र ताजा हुनुपर्छ ।
कुनैपनि काम गर्न अल्छी मान्नुहुन्छ, धेरै समय बसेर बिताउनुहुन्छ भने तपाइंको शरीर कमजोर हुँदै जान्छ । मांसपेशी र हड्डी कमजोर हुन्छ, जसले आस्टियोपोरोसिसको संभावना बढ्छ । तपाईको शरीरको कार्यसंचालन ठिक ढंगले हुँदैन । फलतः अनेकन रोगहरु लाग्न सक्छ । यस्तो खतराबाट बच्नका लागि सक्रिय जीवनशैली अपनाउनुहोस् । नियमित व्यायाम गर्ने, हिँड्ने, कुद्ने, काम गर्ने जस्ता गतिविधि बढाउनुहोस् ।
हाम्रो शरीरले आफ्नो कार्यसंचालन सुचारु राख्नका लागि हाइड्रेटेड रहनुपर्छ । यदि हाम्रो शरीरमा पानीको मात्रा अपुग भयो भने थकान महसुष हुन्छ, अनेक किसिमको समस्याहरु देखा पर्न थाल्छ । किनभने पर्याप्त मात्रामा पानी पिउँदा शरीरको विषाक्त पदार्थ बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ । हामीलाई प्रतिदिन कम्तीमा दुई लिटर पानी आवश्यक हुन्छ ।
हामी काम, करियर, पैसाको दौडामा लागेर आफैलाई भुल्छौं । आफ्नो अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराको हेक्का राख्दैनौ । आरम, मनोरञ्जन जस्ता कुरामा ध्यान दिदैनौ । यो सहि तरिका होइन ।
हरेक दिन केहि न केहि समय आफ्नो लागि निकाल्नु पर्छ । त्यस अवधीमा तपाईं मस्त आनन्द लिनुहोस् । मनोरञ्जन गरेर हुन्छ कि, फिल्म हेरेर हुन्छ, मसाज गराएर हुन्छ कि, मेकअप गरेर नै, आफ्नो लागि अतिरिक्त समय दिनैपर्छ ।